Rafitra fanamafisana ny fantsom-panafody RPR Induction
Ahoana ny fomba fampandehanana induction?
Fanendahana induction dia dingana mafana fanomanana ny tany. Ny mpamorona induction dia mandefa arus mifandimby amin'ny alàlan'ny coil induction, izay miteraka saha elektromagnetika. Ity saha ity dia mitaona ny onja izay niova ho hafanana mifandraika amin'ny fitaovam-pitaovana toy ny vy. Ny hafanana dia miteraka ao ambanin'ilay firakotra, ka mahatonga ny fonosana hikopaka haingana. Ity fomba ity dia mety amin'ny fitsaboana ny faritra fisaka na miolaka eo amin'ny toeram-piasana ary tsy mila fitanana.
Sokajy Technologies Tags rafitra fanesorana loko hosodoko, Fanesorana ny fantsona fantsona fampidirana, Fanesorana ny paompy, Rafitra fanesorana pipa, RPR, Fanesorana fonosana RPR, Rafitra fanesorana RPR, Fampidirana RPR, Fanesorana ny loko RPR, Fanesorana fantsona RPR, Fanesorana ny fantsona RPR, Fanesorana ny harafesina RPR Post Fikarohana